Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » IMEX Buzz Day waxay gacan ka geysataa abuurista ilaaliyaasha isbeddelka
Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
IMEX Maalinta Buzz
Xirfadlayaasha dhacdada meheraddu waxay baran karaan sida loo noqdo ilaaliyaasha isbeddelka oo loo abuuro badeecado, adeegyo iyo ololeyaal loogu talagalay baahiyaha mustaqbalka IMEX Buzz Day. Khibradda dalwaddii bilaashka ahayd ee dhacday Arbacadii, Sebtember 15, waxay leedahay hal il oo si adag mustaqbalka u leh fadhiyo guddi oo daboolaya waxa ka horreeya adduunka ganacsiga, dhacdooyinka iyo teknolojiyadda.
Kulamada dalwaddu waxay sahamiyaan isbeddellada mustaqbalka waxayna ku gudbiyaan jidka gudaha IMEX America
Aasaasaha Dunida Cusub ee Dad isku mid ah iyo horjoogaha isbeddelka, David Mattin, ayaa hoggaamin doona fadhiyada Maalinta Buzz ee diiradda la saarayo.
Wuxuu la wadaagi doonaa isbeddellada muhiimka ah ee loo dejiyay dib -u -qaabaynta dabeecadaha iyo filashooyinka tobankan sano.
Mustaqbalka teknolojiyadda ayaa sidoo kale noqon doona safka ugu sarreeya khubarada warshadaha oo wadaagaya aragtiyo ku saabsan waxa mustaqbalka u yaal warshadaha dhacdooyinka.
Finalka taxanaha ah ee Maalmaha Buzz ee IMEX BuzzHub ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu bixiyo wadada gudaha daabacaadda 10aad ee IMEX America bisha Nofembar, ka caawinta kaqeybgalayaashu inay qorsheeyaan khibraddooda bandhigga, oo ay hoggaaminayaan kooxda IMEX.
Dunida Cusub, Dad isku mid ah, Kalfadhiyo kala duwan oo diiradda la saarayo mustaqbalka
Kormeeraha isbeddelka hogaaminaya David Mattin, oo ah aasaasaha Dunida Cusub ee Dadka Aadanaha ah, ayaa hoggaamiya fadhiyada Maalinta Buzz ee diiradda la saarayo. Bulshadiisa oo ka badan 14,000 “naftooda xiisaha leh” waxay u heellan yihiin is -weydaarsiga aragtiyaha mustaqbalka isbeddellada, farsamada, iyo bulshada. David wuxuu la wadaagi doonaa isbeddellada muhiimka ah ee loo dejiyay inuu dib u qaabeeyo dabeecadaha iyo filashooyinka tobankaan sano iyo sidoo kale talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo garto waxa ku xeeran geeska oo loogu dabaqi karo qorsheynta ganacsiga.
David Mattin, oo ah aasaasaha Dunida Cusub ee Dadka Aadanaha ah
Kalfadhi kale,Mustaqbalka Farsamada waxaa sahamiyay khubaradii ka dambeysay Run the World, Swapcard, Cvent iyo EventMB. Maamulaha Kooxda IMEX Carina Bauer waxaa ku soo biiraya saf weyn oo khubaro warshadeed ah oo wadaagaya aragtiyaha Muxuu mustaqbalka u hayaa warshadaha dhacdooyinka? Ku biiritaanka Carina ee guddigu waxay noqon doontaa Nicola Kastner, Ku -xigeenka, Madaxa Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Dhacdada, SAP; Biyo -xidheennada Colja, Mulkiilaha, Dhaamamka Vok; iyo Mike Dominguez, Madaxweynaha iyo Maamulaha, ALHI.
Wadada aada Mandalay Bay
Kulammo taxane ah oo ah '' Wax I Weydii '', ka -qaybgalayaasha waxaa lagu casuumay inay (ku dhowaad) la kulmaan kooxda IMEX oo bixin doonta jidka gudaha diyaarinta bandhigga. Kooxda iibsadaha ee martida loo yahay waxay wadaagi doonaan talooyin wax ku ool ah si loo caawiyo kuwa ku cusub waayo -aragnimada IMEX gaaro qiimaha ugu wanaagsan ee ganacsiga - iyo madadaalo ugu badan! - ka show. Waxay kaloo u soo bandhigi doonaan ka -qaybgalayaasha guriga cusub ee IMEX America, Mandalay Bay.
Kooxaha Hawlgallada IMEX waxay wadaagi doonaan aragti ku saabsan waayo-aragnimada bandhigga, laga soo bilaabo naqshadda ilaa tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada iyo dhammaan macluumaadka saadka ee muhiimka ah. Waxay faahfaahin doonaan sida ay u abuurayaan bandhig badbaado leh laakiin aan madhalays ahayn, oo waafaqsan shuruudaha badbaadada ee ugu dambeeyay.
Ugu dambeyntii, Wax i weydii wax ku saabsan IMEX America iyo waxa aan la seegin! wuxuu arkaa kooxda Aqoonta oo wadaaga cusboonaysiinta ugu dambaysa ee barnaamijka af -hayeenka dhiirrigelinta ah, dadaallada bandhigyada cusub iyo dhacdooyinka bulshada ee Las Vegas.
Carina Bauer, oo ah Maamulaha Kooxda IMEX, ayaa sharraxaysa: “Saadaalinta iyo ka jawaabidda muuqaalka ganacsiga mustaqbalka mararka qaarkood way adkaan kartaa, laakiin mar walba waa lama huraan. Khubaradeena kala duwan ee xiisaha leh waxay leeyihiin diiradda laser -ka mustaqbalka waxayna wadaagi karaan aragti ku aaddan horumarka loo dejiyay inay qaabeeyaan adduunkeenna.
“Iyada oo IMEX America ay dhacayso bisha Nofembar, waxaan hadda si adag ugu soconnaa waddada Mandalay Bay. Maalinta ugu dambeysa ee IMEX Buzz Day waxaa loogu talagalay in lagu gogol xaaro, loo soo bandhigo bulshada dhacdooyinka meheradda dadka ka shaqeynaya daaha gadaashiisa si loo abuuro bandhig badbaado leh, oo ay ka buuxaan fursado waxbarasho oo loogu talagalay in lagu bixiyo qiimaha ganacsiga dhabta ah. ”
Mashruuca IMEX BuzzHub wuxuu dhacayaa Sebtember 15, isagoo gaarsiinaya isku xirnaanta aadanaha, qiimaha ganacsiga iyo waxyaabaha ku habboon “Waddada Mandalay Bay” ee u dhow IMEX America, Nofeembar 9-11, iyo Smart Isniin, oo ay ku shaqeyneyso MPI 8-dii November .
Diiwaangelinta BuzzHub waa bilaash.
# IMEX21 iyo #IMEXbuzzhub
U Diyaargarowga Aafooyinka Dabiiciga ah: Ka Hor iyo The ...
São Tomé iyo Príncipe ayaa $ 10.7 milyan ka helay Afrika ...
Dalxiiska Malta ee Safarka u fududeynaya Dalxiisayaasha ...
Booqashada Asxaabta iyo Qaraabada ayaa Safri doonta ...